Igwe nyocha mkpisi mkpịsị aka mbụ nke ụwa maka ogwe LCD nke ọma mepụtara | Androidsis
Taa, ihe ngosi mkpịsị aka mkpịsị aka Ọ ghọọla ihe eji achọ mma ọ bụghị naanị na ekwentị kacha mara mma. Ọbụna smart phones adịchaghị Ndị na-eme egwuregwu n'etiti etiti amalitela inye ihe mmetụta ihe ngosi mkpịsị aka, dị ka Ana m ebi X21s na ndị ọzọ.
Usoro mmeghe a dị mma dịka onye na -agụ anụ ahụ nkịtị, n'agbanyeghị adịghị ugbu a na ihuenyo LCD ọ bụla ebe teknụzụ adabaghị na ngosipụta ndị a ... opekata mpe ruo ugbu a.
Iji nye ihe ngosi mkpịsị aka mkpịsị aka, ndị na-eme smartphone kwesịrị iji ihuenyo OLED, ee ma ọ bụ ee. Yabụ ihe na -eme bụ na site n'enyemaka nke igwefoto ọkụ a na -ahụ anya na ogwe ngosi, a na -eji nnyefe ọkụ sitere na panel OLED 'ese foto'.
N'aka nke ọzọ, ogwe LCD enweghị ike ibunye ọkụ, yabụ kama iji panel LCD, ndị nrụpụta ga -adabere Ogwe OLED iji nye ọrụ nyocha mkpịsị aka mkpịsị aka. Agbanyeghị, nke a ga -agbanwe. (Chọpụta: Xiaomi ga-etinye nzọ na ntinye nke ndị na-agụ akara mkpịsị aka ihuenyo n'etiti etiti afọ a)
Mgbe mbọ ndị nrụpụta na -aga n'ihu, emeela ihe nrịba ama na ihe nrịba aka ihe ngosi LCD. Fortsense ekwuputala na ọ rụpụtala nke ọma ihe ngosi mkpịsị aka mkpịsị aka maka ogwe LCD.
Ndị otu R&D na -ekwu na ọ tụgharịrị ma melite atụmatụ ụzọ mkpị mkpịsị aka site na mgbanwe na -aga n'ihu na ndozi nke panel azụ azụ LCD. Nke a doziri mmetụta ngosi, mmetụta onyonyo mkpịsị aka na okwu ndị ọzọ metụtara ya.
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ yiri ka ọ na-eme usoro dabere na algorithm. N'onwe ya, ọ na -eji algorithm mmụta mmụta akwara ozi mmụta miri emi maka ịmata akara mkpịsị aka na njikarịcha na panel LCD. Dabere na ya, ọnụego njirimara akara mkpisi aka dị ka ihe mmetụta mkpịsị aka ọdịnala.
Nke a bụ ihe ịtụnanya, dịka Ọnụ ego panel LCD dị ọnụ ala karịa ogwe OLED. Na mgbakwunye, ojiji nke ogwe LCD dịkwa karịa nke enyo OLED. Ọ bụrụ na nke a na-arụ ọrụ nke ọma, anyị kwesịrị ịnweta ekwentị mmefu ego dị ọnụ ala nke mbụ nwere ihe ngosi mkpịsị aka mkpịsị aka na njedebe nke afọ na-abịa, ma ọ bụ tupu nke ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Emeputara ihe nchoputa mkpisi-aka nke mbu nke uwa maka ogwe aka LCD
Emojis nye m, na nkịtị, fun na-eri ahụ Emoji Mine